ကိုးကွယ်ခြင်း၏တန်ခိုး | Rev.U Min Lwin
Posted by ဦးမင်းလွင် on 27/06/2012
Posted in: တရားေဟာခ်က္.	Tagged: ကိုးကြယ္ျခင္း.	Leaveacomment
သန်းခေါင်အချိန်၌ ပေါလုနှင့် သိလတို့သည် ပဌနာပြု၍ ဘုရားသခင်ကို ချီးမွမ်းလျက် သီချင်းဆိုလေ၏။ ထောင်ထဲ မှာ နှောင်ဖွဲ့ခြင်း ကို ခံရသော သူတို့သည် နားထောင်ကြ၏။ ထိုခဏခြင်းတွင် မြေကြီး သည် ပြင်းစွာ လှုပ် သော ကြောင့် ထောင်ခြေရင်းလည်း လှုပ်ရှား၏။ တံခါးရှိသမျှတို့သည် ချက်ခြင်းပွင့်၍ လူအပေါင်းတို့ သည် နှောင့်ဖွဲ့ခြင်းနှင့် ကင်းလွတ်ကြ၏။ (တမန် ၁၆း၂၅-၂၆)
ကျမ်းစာထဲတွင် ပေါလုနှင့် သိလတို့သည် တရားမျှတမှုကင်းမဲ့စွာဖြင့် ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ခြင်းခံနေရကြသည်။ အကြောင်းမှာ အနာဂတ်ကို ဟောပြောနိုင်သော မိန်းကလေးငယ်တစ်ယောက်၏ အထဲမှ နတ်ဆိုကို နှင်ထုပ် လိုက်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထိုနတ်ဆိုးမျိုး ပိုင်သွန်ဝိညာဉ် (Python spirit) ဟုခေါ်ပါသည်။ ထိုမိန်းကလေး သည် နတ်ဆိုး၏ ထိန်းချုပ်မှု အောက်တွင် ရောက်ရှိနေခဲ့ပြီး ထိုနတ်ဆိုးမှတဆင့် သတင်းစကားများကို ရရှိနေခဲ့ ပြီး လူတို့၏ အနာဂတ်ကို ဟောပြောကာ သူမ၏ ဆရာသခင်များကို စီးပွားဖြစ်ထွန်းစေသူ တစ်ဦးဖြစ်သည်။ ထိုမိန်းကလေးသည် ပေါလုနှင့် သိလတို့နောက်သို့ပြီး သူတို့၏ အခြေအနေမှန်ကို အော်ဟစ်ပြောဆိုနေခဲ့သည်။ သို့သော် အခြေအနေမှန်ဆိုရာတွင် ဘုရားသခင်ကို လှော်ပြောသရော်လိုသော စိတ်ဓါတ်ဖြင့်သာ ပြောဆိုနေ ခြင်း ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ပေါလုနှင့် သိလတို့သည် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏ တံခိုးကို အသုံးပြုကာ ထိုမိန်းကလေး၏ အထဲမှ နတ်ဆိုးကို နှင်ထုပ်လိုက်လေတော့သည်။ ထိုကြောင့် သူမ၏ ဆရာသခင်များက ဝင်ငွေ ရရှိစေနိုင်သည့် နည်းလမ်း ပိတ်သွားလေတော့သည်။ ထို့ကြောင့် မကြေမနပ်ဖြစ်ကာ ရုံးတွင် ဖမ်းဆီးပြီး ရိုက်နှက်ကာ ထောင်ထဲသို့ ပို့ထားလိုက်လေတော့သည်။ သူတို့သည် ထောင်ထဲတွင် နာကျင်မှု ဝေဒနာများကို ခံစားရသည်သာမက လက်ခြေတို့ကိုလည်း လှုပ်ရှား၍မရနိုင်ရန် သံကြိုး၊ သံခြေကျင်းတို့ဖြင့်လည်း ချည်းနှောင် ထားလိုက်လေသည်။ သူတို့ကို ခိုင်ခန့် လုံခြုံသော အချုပ်ခန်းတွင် ထည့်ထားပြီး အစောင့်များလည်း ချထား လိုက်သည်။
ထိုအခြေကို မျက်စိတွင် မြင်အောင်ကြည့်လိုက်ပါ။ သူတို့သည် ကိုယ်လက်များ နာကျင်ကိုက်ခဲ နေမည်။ သွေလေ လည်ပတ်၍မရနိုင်အောင်လည်း ချည်နှောင်ထားမည်။ လှုပ်ရှား၍လည်း မရ ဖြစ်နေမည်။ အခြေအနေ မှာ ညည်းတွားနေရုံမှအပ ဘာမျှ မတတ်နိုင်သည့် အခြေအနေ ဖြစ်သည်။ ညပိုင်းသို့ ရောက်လာသောအခါ ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်း တစ်ဖြေးဖြေး မှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းလာပေမည်။ ထောင်ဆိုသည်မှာ သန့်ရှင်းသော နေရာ တစ်ခုမဟုတ်သဖြင့် ညစ်ပတ် နံစော်သော နေရာတစ်ခု ဖြစ်နေပေမည်။ ထိုနေရာတွင် ကြမ်းပိုးများ၊ ကြွက်များ၊ ခိုလှုံနေထိုင်ရာလည်း ဖြစ်နိုင်သည်။ မည်မျှ ဆိုးရွားလိုက်သည့် နေရာဖြစ်ပါသနည်း။ ထိုအခြေအနေတွင် ပေါလုနှင့် သိလတို့သည် ညည်းတွားရမည့်အစား ဘုရားသခင်ကို အော်ဟစ်ချီးမွမ်းလိုက်လေတော့သည်။ ခံစား ရသမျှကို ဒုက္ခဟု ခံစားမနေတော့ပါ။ ချီးမွမ်းစရာဟုပင် ခံစားအောက်မေ့လိုက်တော့သည်။ နာကျင်နေသော လူ နှစ်ယောက်သည် ဆိုရွားနံစော်နေသော နေရာမှ အမှောင်တကာ့ အမှောင်ထဲမှာပင် အမြင့်ဆုံးသော ဘုရားကို အော်ဟစ်ချီးမွမ်းလိုက်လေသည်။
ထိုသူတို့သည် ရူးသွပ်သွားခြင်း မဟုတ်ကြောင်း သိစေချင်ပါသည်။ သံသယ မရှိပါနှင့်။ ဘေးတွင် ရှိနေသော သူတို့နှင့်အတူ ထောင်ကျနေသော လူများက သူတို့၏ အသံကို ကြားသောအခါ အော်ဟစ်ဆဲဆိုကောင်း ဆဲဆို နိုင်ပါသည်။ အခြေအနေဆိုးထဲတွင် ဘုရားကို ချီးမွမ်းနေသောကြောင့် ရူးမိုက်နေသူများဟု ထင်မြင် ကောင်း ထင်မြင်နေပေလိမ့်မည်။
ပေါလုနှင့် သိလတို့သည် ချီးမွမ်းကိုးကွယ်ခြင်း၏ တန်ခိုးကို နားလည်သဘောပေါက်ပြီး ဖြစ်သည်။ သူတို့သည် သူတို့၏ အခြေအနေကို သဘောပေါက်ထားပြီး မည်သို့ပင် အခြေအနေက ဖြစ်နေစေကာမူ ကိုးကွယ် ခြင်း၏ တန်ခိုးက ပြောင်းလဲမသွားကြောင်း သိထားပါသည်။ သူတို့က အသေအချာ နားလည်ထားသည်မှာ ပျက်စီးခြင်း တံပိုးမှ လွတ်မြောက်စေသည့်အရာမှာ ချီးမွမ်းကိုးကွယ်ခြင်းသာ ဖြစ်ကြောင်း ယုံကြည်ထားပါသည်။ လက်ရှိ မှောင်မိုက်တွင်းထဲမှ အခြေအနေကို ပြောင်းလဲလိုလျှင် ဘုရားသခင်ကို ကိုးကွယ်ခြင်းအမှု ပြုရမည် ဖြစ်ကြောင်း နားလည် ထားသည်။ သူတို့သည် ချီးမွမ်းကိုးကွယ်မှုကို ပြုလုပ်လိုက်လျှင် ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများ သက်ရောက် လာမည် ဖြစ်ကြောင်း ယုံကြည်ထားပါသည်။
ကျမ်းစာတွင်ဖော်ပြထားသည်မှာ “ထိုခဏခြင်းတွင် မြေကြီးသည် ပြင်းစွာလှုပ်သောကြောင့် ထောင်ခြေရင်း လည်း လှုပ်ရှား၏။ တံခါးရှိသမျှတို့သည် ချက်ခြင်းပွင့်၍ လူအပေါင်းတို့သည် နှောင့်ဖွဲ့ခြင်းနှင့် ကင်းလွတ်ကြ၏။” ဟူ၍ ရေးသားထားပါသည်။
ကြည့်ပါ။ ။ ဤလောကသည် လူများကို ချီးမွမ်ကိုးကွယ်ခြင်းဆိုသည့် အရာထဲတွင် အရေမရ အဖတ်မရ နစ်မြုတ်နေကြောင်း နားလည်သဘောပေါက်နေကြသည်။ သေချာစွာ စဉ်းစားကြည့်ပါ။ သင်ဟာ တစ်ခုခု မရခဲ့ရင် ချီးမွမ်းကိုးကွယ်ရန် ရည်ရွယ်ချက် တစ်စုံတစ်ရာလည်း မရှိပါ။ ရှင်မဿဲ အခန်းကြီး (၄) တွင် သခင် ယေရှုသည် ရက်ပေါင်းလေးဆယ် အစာရှောင်သည်။ ထိုအချိန်တွင်လည်း တောထဲ၌ စာတန်၏ စုံစမ်း သွေးဆောင်ခြင်း ကိုခံယူခဲ့ရသည်။ ထိုအဖြစ်အပျက် အစမှအဆုံးအထိ လေ့လာကြည့်ပါက ပထမဦးဆုံး ကျောက်ခဲမှ မုန့်ဖြစ်စေရန် တောင်းဆိုသည်။ ဗိမ္မာန်တော်မှ ခုန်ချရန်တောင်းဆိုသည်။ ထိုတောင်းဆိုချက် နှစ်ခု စလုံးကို ကြည့်ပါက “ဘုရားသခင်၏ သားတော်မှန်ပါက” ဟူသော စကားလုံးဖြင့် ဖော်ပြထားသည်။ သို့သော် ကိုယ်တော်က နှစ်ခုစလုံးကို နှုတ်ခပတ်တော်ဖြင့် ပြန်လည်တုန့်ပြန်ခဲ့ပြီး စာတန်၏ တောင်းဆိုမှုကို ငြင်းပယ်ခဲ့ပါ သည်။ နောက်ဆုံးတွင် မြင့်မားသော တောင်ပေါ်သို့ ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီး လောက စည်းစိမ် များကို ပြညွှန်ကာ စာတန်က သူ့ကို ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ရန် တောင်းဆိုခဲ့ပါသည်။ သို့သော် ကိုယ်တော်က စာတန်ကို အော်ဟစ်ငေါက် ငမ်းကာ ငြင်းပယ်ခဲ့ပြီး နောက်ဆုံးတွင် နှုတ်ခပတ်တော်ဖြင့်ပင် ချေပခဲ့သည်ကို ဖတ်ဖူးပြီးသားဖြစ်ပေလိမ့်မည်။
စာတန်၏ လုပ်ဆောင်မှု ပထမအချက်ကို ကြည့်ပါ။ ကျောက်တုန်းကနေ မုန့်ဖြစ်စေဘို့ တောင်းဆိုသည်။ စာတန်သည် ခန္ဓာအသွေးအသား၏ ဆန္ဒနှင့် တောင်းဆိုမှုဖြင့်ချဉ်းကပ်ခဲ့သည်။ အစားအသောက်ဆိုသည်မှာ လူတိုင်းအတွက် ဦးစားပေး အရေးကြီးနေရာတွင် ထားကြသည်မဟုတ်ပါလား။ ဒုတိယအချက်အနေဖြင့် နှုတ်ခပတ်တော်ကို ဦးစားပေးသောသူကို နှုတ်ခပတ်တော်ကို ဆန့်ကျင်မှု ပြုပြီး အသက်ရှင်လာဘို့ ဆောင်ရွက် သည်။ တတိယအချက်အနေဖြင့် စာတန်သည် သူ့ကို ဝတ်ပြုကိုးကွယ်လာစေရန် လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်ကို တွေ့ မြင်နိုင်ပါသည်။ ဤနေရာတွင် ခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်မည်ဆိုပါက ထိုအချက်သုံးချက်စလုံး လုပ်ဆောင်ခဲ့သည့် ရည်ရွယ်ချက်မှာ သူ၏လက်အောက်သို့ ရောက်ရှိသွားပြီး သူ့ကို ဝတ်ပြုကိုးကွယ်လာရန် လုပ်ဆောင်သည်ဟု နားလည်သဘောပေါက်မိပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော ကိုးကွယ်ခြင်းကို ခံယူခြင်းဖြင့် သူ၏ ဘုန်းတန်ခိုး ကြီးထွား လာစေရန် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။
စာတန်ကို ချီးမွမ်းကိုးကွယ်သူများကို စာတန်က ပစ္စည်းဥစ္စာများ ပေးကမ်းမစနိုင်ပါလျှင် ဘုရားသခင်က ပိုမို၍ ပေးကမ်းမစနိုင်ပါလိမ့်မည်။
Worship (ကိုးကွယ်ခြင်း) ဆိုသော စကားလုံးသည် အင်္ဂလိပ် ရှေးဟောင်းစကားလုံးဖြစ်သော Weordhscipe မှ ဆင်းသက်လာပြီး အဓိပ္ပါယ်မှာ “ချီးမွမ်းထိုက်သော၊ ချီးမြှင့်ထိုက်သော” ဟူ၍ ဖြစ်ပါသည်။ ဘုရားသခင်သည် ချီးမွမ်းကိုးကွယ်ခြင်းကို ခံထိုက်သောအရှင်ဖြစ်ပါသည်။
ဂရိဝေါဟာရအားဖြင့် “Proskyneo” ဟုခေါ်ဆိုပြီး ဟီးဘရူးဘာသာအားဖြင့် “shachac” ဟူ၍ဖြစ်ပြီး ဘာသာစ ကားနှစ်မျိုးစလုံး၏ အဓိပ္ပါယ်မှာ ဆက်ကပ်အပ်နှံသည့် ကိုယ်ဟန် အနေအထားနှင့် ဘုရားသခင်၏ အုပ်စိုးမှုကို ကို ရည်ညွှန်းနေပါသည်။ ၎င်း၏ မူရင်းအဓိပ္ပါယ်မှာ “ဒူးထောက်ခြင်း” သို့ “ဂါရဝပြုရန် ပျက်ဝပ်ခြင်း” သို့ “ဦးညွှတ်ခြင်း၊ ရှိခိုးခြင်း”၊ “အရိုအသေပေးခြင်း”၊ “အသနားခံခြင်း၊ ရိုသေခန့်ညားသော စိတ်နှလုံးကို ဖော်ပြခြင်း၊” စသည့် အဓိပ္ပါယ် များ ပါဝင်နေပါသည်။ ထိုအရာတို့မှာ ကိုးကွယ်ခြင်း ဟူသော ဝေါဟာရဖြင့် စပ်ဆက်လျက် ရှိပါသည်။ ထိုစကား လုံးတို့မှာ အစေခံခြင်း၊ ဆက်ကပ်ခြင်း၊ ရိုသေလေးမြတ်ခြင်း စသည့်တို့ကို ပြုလုပ်ခြင်သည့် စိတ်နှလုံး သဘော ကို ညွှန်ပြနေပါသည်။
တန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိတို့၏ မြစ်ဖျားခံရာ အရင်းသည် ကိုးကွယ်ခြင်းဖြစ်သည်။
အသင်းတော်ဆိုသည်မှာ ယုံကြည်သူများ အစုအဝေဖြစ်ပြီး ဝတ်ပြုကိုးကွယ်မှု ပြုလုပ်သည့် နေရာတစ်ခုအဖြစ် အများက အသိအမှတ်ပြုထားပါသည်။ ရှင်မဿဲ ၁၈း၁၆-၂၀ တွင် ကိုယ်တော်သည် တပည့်တော်များနှင့် နောက်ဆုံးတွေ့ဆုံခဲ့ပြီး၊ ပြောကြားခဲ့သည်မှာ
ယေရှုသည် အနီးအပါးသို့ ချဉ်းကပ်တော်မူပြီးလျှင်၊ ကောင်းကင်ဘုံ၌၎င်း၊ မြေကြီးပေါ်၌၎င်း၊ စီရင်ပိုင် သော အခွင့်တန်ခိုး ရှိသမျှတို့ကို ငါခံရပြီ။ သင်တို့သွား၍ လူမျိုးတကာတို့ကို ငါ့တပည့်ဖြစ်စေလျက်၊ ခမည်းတော်၊ သားတော်။ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏ နာမ၌ ဗတ္တိဇ့ကို ပေးကြလော့။ ငါသည် သင် တို့အား ပေးသမျှသော ပညတ်တော်တို့ကို စောင့်ရှောက်စေခြင်းငှါ ဆုံးမသြဝါဒပေးကြလော့။ ငါသည် လည်း ကပ်ကမ္ဘာကုန်သည့်တိုင်အောင် သင်တို့နှင့် အတူ အစဉ်မပြတ် ရှိသည်ဟု တပည့်တော်တို့အား မိန့်တော်မူ၏။ (မဿဲ ၂၈း၁၈-၂၀)
အသင်းတော်သည် ဝတ်ပြုကိုးကွယ်သော နေရာမှ အစပြုခဲ့ပါသည်။ (တမန် ၂း၁-၁၃) ပင်တေကုတ္တေနေ့တွင် သခင်ဘုရားကို ဝတ်ပြုကိုးကွယ်မှုကို ပြုနေကြသော သူတို့အပေါ်တွင် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ကို ဘုရား သခင်က သက်ရောက်စေကာ ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော်ကို အစပြုခဲ့ပါသည်။ ကျွန်တော် ဆိုလိုသည်မှာ ဘုရားသခင်သည် ကိုးကွယ်မှုပြုနေသော သူတို့အပေါ်တွင် ကြီးမားသော နိမိတ်လက္ခဏာကို ပြုလုပ်ချင်သော ဘုရားဖြစ်ပါသည်။
သခင်ဘုရား၏ နာမတော်၌ ကိုးကွယ်မှု ပြုနေကြသော သူတို့သည် ကြီးမားသော တန်ခိုးကို ခံစားခဲ့ရကြသည်။ ဘုရားသခင်၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ အသင်းတော်ထဲတွင် ထိုသို့ ဖြစ်စေချင်ပါသည်။ ကျမ်းစာထဲတွင် စိတ်ကြိုက် လေ့လာကြည့်ပါ။ အသင်းတော်ထဲတွင် ဆုတောင်းမှုပြုခြင်း (သို့) ကိုးကွယ်မှုပြုခြင်း လုပ်သော နေရာတိုင်းတွင် ထူးခြားသော အမှုအရာများ ရှိနေကြသည်။ တမန်တော် (၁၃)ကို ဖတ်ကြည့်ပါ။ သခင်ဘုရားဝတ်ကို ပြု၍ ကိုးကွယ်မှုကို ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ဘုရားသခင်က အမှုတော်အတွက် လိုအပ်သောအရာများကို ဖွင့်ပြခဲ့သဖြင့် တမန်တော်တို့က ဖော်ပြသည့်အတိုင်းလုပ်ဆောင်ခဲ့ရာ အံ့သြဘွယ်နိမိတ်လက္ခဏာပေါင်း မြောက်မြားစွာကို မြင်တွေ့ ခံစား ခဲ့ရလေသည်။
ကိုကွယ်ခြင်း၏ တန်ခိုးက ဘာတွေဖြစ်နိုင်သလဲ။
ကိုးကွယ်ခြင်းသည် ဘုရားသခင် အုပ်စိုးသည့် နေရာတစ်ခုကို ဖန်တီးနေခြင်းဖြစ်ပြီး၊ လူတို့တွင် ဘုရားသခင် ဖန်းဆင်ကာစက ရှိခဲ့သည့် မူလအခြေအနေတစ်ခုကို ပြန်လည်ရှာဖွေနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ လူသည် အာဒံအပြစ် ပြုလုပ်လိုက်ခြင်းဖြင့် ဘုရားသခင်နှင့် မိတ်သဟာရ ဆုံးရှုံးသွားသည်သာမက ဘုရားသခင်၏ မူလရည်ရွယ်ချက် ဖြစ်သည့် ကမ္ဘာမြေကြီးကို အုပ်စိုးမှုပြုရန် ဟူသည့် ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပါ ဆုံးရှုံးသွားခဲ့ပါသည်။ သို့သော်လည်း ကျွန်တော်တို့ လူသားများကို ထိုအရာများ ပြန်လည် ပေးအပ်ရန် သခင်ခရစ်တော်က ကားတိုင်တော်တွင် ပြုတော်မူခဲ့သည့် လုပ်ဆောင်ချက်သည် ယုံကြည်သူများအတွက် အဓိက ကျသော အရာတစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်ကို ကိုးကွယ်ရာနေရာတါင် ဘုရားသခင်၏ တန်ခိုးအစွမ်းများက မှောင်မိုက်ကို ချိုးဖြတ်ပြီး စီးဆင်းလာသည်။ ကိုယ်တော်သည် သူ၏အုပ်စိုးမှုကို သူ၏ ရွေးနှုတ်ခြင်းဖြင့် ပြန်လည်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ဘုရားသခင်၏ မျက်မှောက်တော်တွင်သာ တန်းခိုးတော် တည်ရှိနိုင် ပါသည်။ ဝတ်ပြုကိုးကွယ်သော နေရာတွင် လွတ်မြောက်ခြင်း ရှိပါသည်။ ကျွန်တော်တို့၏ နှလုံးသားသည် စစ်မြေပြင်တစ်ခုတွင် ရှိနေသကဲ့သို့ ဆုံးဖြတ်ရ မည်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ဘုရားသခင်ကို ကိုးကွယ်မှုပြုရန် လမ်းကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါက ဘုရားသခင်၏တန်းခိုးနှင့် အုပ်စိုးခြင်းသည် ပြန်လည်တည်ဆောက်လာပေလိမ့်မည်။ ထိုမျှမက ကျွန်တော်တို့အားဖြင့် အခြားလူများထံသို့ လည်း ဆက်လက် စီးဆင်းသွားမည်ဖြစ်သည်။
လူတို့၏ ကိုးကွယ်ခြင်းသည် လူတို့စတင်ဖြစ်တည်ကတည်းကဖြစ်သည်။ လူသည် ဘုရားသခင်၏ သားသမီးများ ကဲ့သို့ဖြစ်ပြီး ဝတ်ပြုကိုးကွယ်မှု စတင်ကတည်းက ဆက်ကပ်အပ်နှံမှုများဖြင့် စတင်ခဲ့သည်။ ကိုးကွယ်ခြင်း အားဖြင့် လူသည် ဘုရားသခင်၏ ရှေ့တွင် ရှင်ဘုရင်များကဲ့သို့၎င်း၊ ယဇ်ပရောဟိတ်များကဲ့သို့၎င်း ဖြစ်ကြသည် (ဗျာဒိတ် ၁း၆)။ ကိုးကွယ်ခြင်းဖြင့် ရှင်ဘုရင်ဖြစ်နိုင်သည့် အခွင့်အလမ်းများနှင့် ခရစ်တော်၏ နိုင်ငံတော်ကို အုပ်စိုးနိုင်သောသူများ ဖြစ်လာကြသည်။
ရှင်ပေါလုနှင့် သိလတို့သည် ကိုးကွယ်မှုကို ပြုလုပ်သောအခါ မြေကြီးလှုပ်ခြင်းနှင့် ထောင်တံခါးပွင့်ခြင်း၊ လက် ထိပ်သံကြိုးများ ပြုတ်ထွက်ခြင်း ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သည်။ ထိုအရာသည် ကိုးကွယ်ခြင်း၏ တန်ခိုးဖြစ်သည်။ ကိုးကွယ်ခြင်းအားဖြင့် အောင်မြင်ခြင်းကို ခံစားရယူနိုင်သည်။ ကိုးကွယ်ခြင်းအားဖြင့် ဘုရားသခင်ထံမှ လွှတ်ခြင်း အခွင့်ကို ရရှိနိုင်ပါသည်။ သင်လိုအပ်သမျှ အရာခပ်သိမ်းကို သင်၏ ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းဖြင့် ရှာဖွေပါ။ အသက် ရှင်သော ဘုရားသည် သင်လိုသမျှကို ပေးစွမ်း နိုင်ပါသည်။ ထိုဘုရားကို ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းဖြင့် အသက် တာ၏ ငြိမ်သက်ခြင်းကို ရှာဖွေပါ။
← ဘုရားသခင် အသိအမှတ်ပြုသော ကိုးကွယ်ခြင်း
ဟေဗြုန်မြေကို အပိုင်စားရတဲ့ ကာလက်ထံမှ ခွန်အားယူစရာ →